#သူသိပါစေ🤗🤗🤗🤗 – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဟုတ်ကဲ့၊ အာနာပါန မှတ်လို့ကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ နိမိတ်မပေါ်လို့ စိတ်မသာယာ ဖြစ်ဘူးတယ် ၊ဘာဆက်လုပ်ရ မည်လဲခင်ဗျ? နိမိတ်ပေါ်လျင် အာနာပါန မမှတ်ဘဲ နိမိတ်ကို လိုက်ကြည့်မိတယ် ၊နိမိတ် ပျောက်သွားတယ်၊ ဘာလုပ် ရ မည်လဲ၊ လမ်း ညွှန် ပေးပါ? နိမိတ် ကို မကြည့် ရ ပါဘူးရှင့် နိမိတ်က မခိုင်သေးပဲ ကြည့်ရင် ပျောက်ပါတယ် ရှင့်ခိုင်ချင်ရင် အာနာပါန ကိုပဲ မှတ်ပါရှင့်။ နိမိတ် ထဲ စိတ် ကို စိုက် လို့ရ တဲ့ အချိန်မျိုး ကျမှ ကြည့် ပါရှင့်။ အဓိက စိတ်မှာ မသာယာတာ ဖြစ် သွား တယ်ဆို တာဟာ လောဘ ကိလေသာ သို့မဟုတ် ဒေါသ ကိလေသာ ကြောင့်ပါ. ဒါမို့ မိမိ စိတ်က လေး မှာ ကိလေသာအဖြစ်မခံပဲ သတိလေးနဲ့ စောင့်ကြည့်တဲ့ အလေ့အထကို ပိုလေ့ ကျင့်ပေး ရ ပါမယ် ရှင့်။ လိုချင် ရချင် နေ တဲ့ စိတ် သဘောမှန် သမျှ ဟာ လောဘ ကိလေသာကြောင့် ဆိုတာ လေးကို မိမိစိတ်ထဲမှာ သေသေချာချာ လေး လက်ခံမိအောင် သဘော ပေါက်ထားရ ပါမယ် ရှင်။ (ဒီ အချက်သည် အင်မတန် ကိုမှ အရေး ကြီးလှ ပါသည်) လိုချင်တာ မရ တော့ ဒေါသ ဖြစ်တယ် လိုချင်တာ ရတော့ လောဘ ဖြစ်တယ် ဒီ လောဘ ဒေါ သ စတာ တွေဟာ စိတ်မှာ ကပ်ငြိ လာ တဲ့ နီဝရဏ တရားတွေပါ။ အစွန်း၂ပါးရောက်နေတာပါ။ လောဘ အစွန်းရောက်လိုက်၊ ဒေါသ အစွန်း ရောက်လိုက် ဖြစ်နေတာပါ။ဒီတရားတွေ ပိတ်ဆီးကာရံနေရင် စိတ်မှာ အကြည် ဓာတ် မထွက်နိုင် တော့ပါဘူး။
#အကြည် ဓာတ် ကလေးက အလင်းဓာတ် လေးပါ။ ဒီအလင်း ဓာတ်လေး ကို လိုချင်ရင် အလင်း မရသေးလို့ မကျေ နပ် တဲ့စိတ် အလို မကျ တဲ့ စိတ်တွေ ကိုသာ ဖယ်ရှားရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အကြောင်း တရား ဖြစ်တဲ့ နီဝရဏ တရား ကို ဖယ်ရှား လိုက်မှ သာ လို ချင် ရချင် နေ တဲ့ အကျိုး တရား ဖြစ်တဲ့ အလင်းလေးက ရလာမှာ ပါနော်။ ဒီတော့ အလင်း လို ချင်ရင် အလင်း ကို ရှာနေ မျှော်နေရမှာ မဟုတ် ပါဘူးနော်။..အလင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းရင်းကိုရှာပြီး သူ့ကို ပြုပြင် ယူ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းတရား နီဝရဏ တရား တွေကို ဖြစ်ခွင့် မပေးပဲ သတိ လေး နဲ့ မူလ ကမ္မဌာန်း အာရုံ လေးမှာပဲ စိတ်ကလေးကို ကပ်ထားပြီး.. အားထုတ် နေခြင်းဟာ အကြည် ဓာတ် ဖြစ်တဲ့ အလင်းဓာတ်ကို ဆွဲငင် ယူနေတာနဲ့ တူတူပါပဲရှင့်။ လိုချင်တာ မရ တက်တာဟာ သဘာဝ ပါရှင့် ဒါ ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ သဘော တရားလေးက အင်မတန်ကို ရိုးရှင်း လွန်းလှ တာပါ။ လောဘ ကိလေသာလေးက ကြားခုခံနေလို့ပါ။ ကိလေသာတွေဟာ ဉာဏ်ကို ပိတ်ဆီးတက်တဲ့ တရားတွေမို့..ကြိုက်တဲ့ ကိလေသာ တခုခုကို မိမိစိတ်မှာ ဖြစ်ခွင့် ပေးကြည့် လိုက်ပါ။ ရပြီး သား အလင်းဓာတ် တွေအားလုံး ဘယ်နားရှာရမလဲ မသိအောင် ပျောက်ဆုံး သွားမှာပါ။ ဒီတော့ နိမိတ် လေး ပျောက်သွားပြီ ဆိုတာ တွေဟာ ဒီအချက် တွေကြောင့် ပါ။ ဒါမို့ ကိလေသာ ဟာ အညစ် အ ကြေး ဉာဏ်ကို ပိတ်ဆို့ တက် တဲ့ တရားလို့ ဆိုပြီး အဲ့ဒီအ သိလေးကို လက်ကိုင်ထားဖို့လေးပဲ လို တာပါ။ ယောဂီအားလုံး နီးပါးက ကမ္မဌာန်း အာရုံ ယူတက်ပြီးသူများသာ ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ဒါဆို သူ့ကို မရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? လွယ်လွယ်လေးပါ။ ကိလေသာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပေး လိုက်ပါ။ဒီလိုသိပေးတါများလာတော့ စိတ်မှာ ကိလေသာက ဖြစ်ခွင့်မရ တော့လို့ နီဝရဏ တရား တွေလည်း ရှင်းလင်း သွားပါပြီ။ နီဝရဏ တရားတွေ ခဏတာလေး ရှင်းလင်း သွားတဲ့ အချိန် မျိုး မှာသာ အလင်းရောင်လေး ပေါ်ထွန်းလာရတာပါ။ ခဏလေး အလင်းလေးမြင်လိုက် တယ်ဆိုတာ တွေ ဟာဒါကြောင့် ပါနော်။ ကြာကြာလင်းနေချင်ရင် နီဝရဏ တရားတွေကို ကြာကြာ ဖယ်ထုတ် နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲ လုပ်ရ မှာပါ။ဒီတော့ မလင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ မိမိစိတ် ကလေးကိုသာ တစ် ချက်ပြန် လှည့်ကြည့် ပေးပါ။ ငါ့စိတ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေ သလဲ? ပူလောင် မှု လှုပ်ရှား မှု သဘော လေး တခုခု ဖြစ်နေပြီ စိတ်ကလေးဟာ သူ့ကြီးသက်သက် ပကတိ အကြည်ဓာတ်လေး မဟုတ်ပဲ တခုခု ရဲ့ ရောနော ခြင်းကို ခံနေရ ပြီဆို ရင် စိတ်မှာ လှုပ်ရှားလာ ပါတယ်။ တစ်နည်း ဘဝင် မငြိမ် တော့ပါဘူး။
ထင် ရှားတဲ့ ဥပမာလေး ပေးရရင် ရင်ခုန်လာတယ်ပေါ့ ..လောဘဖြစ်ရင်လည်းခုန်တယ် ဒေါသ ဖြစ်ရင် လည်း ခုန် တယ် ခုန်နေ သမျှ ဘဝင် မငြိမ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဘဝင် မြင့် နေ ပါ တယ်။ ဘဝင်မြင့်နေသမျှ ဘဝင်မကျသေးပါဘူး။ ဘဝင်မကျရင် တုန်လှုပ် နေသေးတာမို့ အစွန်း ရောက် နေပါ သေးတယ်။ ဒီတော့ ဘဝင် မကျတာ ကို ဘဝင် ကျဖို့ ဆို ရင် ဘာလာလာ မကပ် ညှိ အောင် သတိလေး ဆောင်ထားမှပဲ ရမှာပါ။လောဘဖြစ်ရင် ပျော်တယ်။ဒေါသ ဖြစ်ရင် ညစ်တယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လို သဘာဝမျိုးနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ အင်မတန် ကြည်လင် သန့်ရှင်းနေတဲ့ ရေကြည် လေးထဲ ကို အရောင် ပါသော အရည် တစ်မျိုးမျိုး အရောခံ လိုက်ရ လို့ မူလ ပင်ကိုယ် ရေ အရောင် လေး ပြောင်း သွားရသ လိုပါပဲ။ ဒီဥပမာလေးလိုပဲ မိမိ စိတ်ကလေးကပင် ကိုယ်မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း စိတ် ကလေးဟာ ရေကြည် လေးပါ။ ဒီ ရေကြည်လေးဟာ ကိလေသာ ဆိုတဲ့ အရောင် တွေကို အဆိုး ခံလိုက် ရလို့ ရေ အရောင် အကြည် ဓာတ်လေး ပျောက် ပြီး အခြား အရောင် တွေ ရောက် လာသ လိုမျိုး ပါ။ ဒီတော့ အကြည် ဓာတ် လေး ကို ပြန် လို ချင် တယ် ဆို ရင် အ ရောင် နဲ့ တူ တဲ့ ကိလေသာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ရာ ဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်း အမှန်ပါပဲရှင်။ အကုန် အစင် မဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှ အကြည်ဓာတ်လေးကလည်း အမြဲမလင်းနိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ကာ.. နီဝရဏ တရားတွေကို သတိလေးနဲ့တွန်း ဖယ်ပေး နေရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပေး နေရုံ မှတပါးအခြားမ ရှိလေတော့ပါ။ သတိမရှိတဲ့ အချိန်နီဝရဏတရား တွေဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့သူ့ကို မရှိ အောင် တားဆီး ဖို့ရာမှာ လည်း သတိ တရား မှ တပါး အခြား မရှိ တော့ ပါ။ စိတ်မှာ နီဝရဏ တရား တွေ ကင်း နေမှ နိမိတ်က လင်းနေ တာပါ ရှင့်။ အမြဲ လင်းချင်ရင် အမြဲ ဖယ်နေပါ။ မရလို့ လည်း စိတ် မညစ် လိုက် ပါနဲ့။ ရလို့ လည်း မပျော်ရွှင် လိုက်ပါနဲ့။ အလှုပ် အခတ်မရှိတဲ့ တည်ငြိမ် နေတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ လိုချင်နေတဲ့ အရာတွေက ရလာတက်ပါတယ်ရှင့်။ဒါမို့အဓိက အကျဆုံး အ ချက် လေး က တော့ စိတ် မှာ နီ ဝ ရဏ တ ရား တွေ ကို ဖြစ် ခွင့် မ ရ အောင် သ တိ လေး နဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီး မူလ ကမ္မဌာန်း အာရုံလေး ကလွဲရင် ကျန်တာ ဘာဆို ဘာမှ စိတ်မဝင်စားတာက အကောင်းဆုံး ရလဒ်တခု ရလာပါလိမ့်မယ်ရှင့်။
ဤမေးခွန်းလေးကိုအကြောင်းပြု၍#နိမိတ်မလင်းဘူးဖြစ်နေတယ်#နိမိတ်ကပျောက်သွားတယ်#နိမိတ် မရလို့ စိတ်ညစ် တယ် #နိမိတ် ရအောင် ဘယ်လိုလေ့ ကျင့်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ #နိ မိတ် ကိုအကြာကြီး လင်းချင်တယ်#နိမိတ်ကလင်းလိုက် ပျောက်လိုက်#နိမိတ်ကခဏလေးပဲပေါ် တယ်#နိမိတ်ကိုခိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ#နိမိတ်ကိုကြည့်ရင်ပျောက်သွားတယ်#နိမိတ်ကသိပ်မလင်းဘူး#နိမိတ် ရချင်တယ်စသောစသော မရေ မတွက်နိုင်သော နိမိတ်အလင်းနှင့် ပတ်သတ် သော မေးခွန်း မြောက် များစွာ တို့အား တစ်ပေါင်း တည်း ဖြေပေး လိုက်ရပါ တယ်ရှင့် #နိမိတ် သည်စိတ်#စိတ်သည် နိမိတ်#စိတ်လင်းမှ နိမိတ် လင်းသည်။#စိတ်သည် အကြည် ဓာတ် သက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။
#သူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အာရုံကိုသိတက်သောသဘောသက်သက်မျှ သာဖြစ် ၏နိမိတ် ဆိုသည်မှာ နိမိတ္တဆို တဲ့ စကားကလာ ပါတယ် #သမာဓိတည်ကြည်မှု့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသည့် အရောင် အလင်းကိုနိမိတ်လို့ ခေါ်ပါသည် ။#သမာဓိ တည်ကြည်မှု့ ကြောင့် အချက် ပြပေး သည့် သင်္ကေတကိုနိမိတ်လို့ခေါ်ပါသည်။#စိတ်နှင့်နိမိတ်သည်နိမိတ်ကအရင်ဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်၏#အကြည်ဓာတ်သမာဓိကြောင့်သာနိမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။#နိမိတ်ကိုပြင်မရပါစိတ်ကိုပြင်ရပါမည်။ဤသို့ ဆိုလျှင် ဖြင့် နိမိတ် အလင်း နှင့် စိတ်အလင်း အကြောင်း လေး ကို အတန် အ သင့် ရိပ် မိ သွားမည်ဟု ယူဆမိပါ၏။ အကြောင်းကိုပြုပြင်ဖို့ အချိန် ပေးပါ။ #အကြောင်း ကောင်းမှ အကျိုး ကောင်းမှာပါ။#အကျိုးမကောင်းရင်အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲလို့ပြန်ပြန်သတိရပေးပါနော်။အချိန် မရ၍ ယခု ထက်ပို၍ အသေး စိတ်မ ရေးပေးနိုင် သေးခြင်း အတွက် လည်း အနူး အ ညွတ် တောင်း ပန် လိုက်ရ ပါ ၏။ ရရှိ ထား သော မေး ခွန်း တချို့ အတွက် ဖြေ ပေးလိုက် ရပါ၏။ ယောဂီအားလုံး တရား တွေ့ ချမ်းမြေ့ ကြပါ စေရှင်။